Arrin sabab u ah soo noqnoqodka FATAHAADDA Beledwayne oo la sheegay! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Arrin sabab u ah soo noqnoqodka FATAHAADDA Beledwayne oo la sheegay!
Arrin sabab u ah soo noqnoqodka FATAHAADDA Beledwayne oo la sheegay!
(Beledwayne) 29 Okt 2019 – 10 Sanno ku dhawaad ayaan degeneyn Beled weyne waligeed ma arag Wabi soo Fatahay, walibana waxaan u Dhaweyn xaafada Hilo Bacaad oo uu Wabiga noo muuqdey, hadaba maxaa u sabab u ah in xiliyadaan dambe Wabiga fataho
Dowlad dhexe markey buburtey dadka waxay degeen dhamaan goobihii biyaha mari jireen sida Waadiyada iyo Buundooyinkii sidoo kale waxaa loo dhawaadey oo la degey agagaarka webiga.
Sidaa darteed waxay arintaan sahashey in biyihii ay soo galaan Xaafadaha Magaalada Beled Weyne marka reer Baled Weyn haddii aysan qorshe la imaan waligood Fatahaad ka dhamaanayaan.
Previous articleInter Milan oo heshay DAKHLI rikoodh jebis ah, balse faa’iido ma hayso (Ogoow sababta)
Next articleDIGNIIN: Duufaantii ugu CUSLAYD oo ku dhufan karta gobollada Woqooyi Galbeed & Woqooyi Bari Somalia